के तपाईं मोटरसाइकल चलाउनु हुन्छ? यी पाँच कुरामा ध्यान दिनुस ठूलो दु’र्घ’ट’ना बाट बच्न सकिन्छ ! – AB Sansar
के तपाईं मोटरसाइकल चलाउनु हुन्छ? यी पाँच कुरामा ध्यान दिनुस ठूलो दु’र्घ’ट’ना बाट बच्न सकिन्छ !
October 29, 2020 adminLeaveaComment on के तपाईं मोटरसाइकल चलाउनु हुन्छ? यी पाँच कुरामा ध्यान दिनुस ठूलो दु’र्घ’ट’ना बाट बच्न सकिन्छ !
काठमाडौं । नेपालमा बिक्री हुने सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा दुईपाङ्ग्रे साधन (बाइक) छन् ।मोटरसाइकल र स्कुटर गरी वार्षिक करिब ३ लाखको हाराहारीमा दुई पाङ्ग्रे सवारी नेपालमा बिक्री हुने गरेको छ । हालसम्म नेपालमा ४० लाख बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी नेपालमा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारको लागि भरपर्दो सवारीको साधन बनेको बाइक युवाहरुका लागि शौख पनि हो । अनिवार्य सवारी साधन वा शौखको सवारी साधन जे भएपनि बाइक राइड गर्ने व्यक्तिले केही महत्वपूर्ण पार्ट्सका विषयमा भने जानकारी राख्नु नै पर्ने हुन्छ । विशेषत मोटरसाइकलमा ब्रेक, क्लच, चेन स्पोर्केट, टायर, इन्धन तथा मोबिल, ब्याट्रीका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
कुनै पनि सवारीका लागि ब्रेक ब्रेकिङ सिस्टम सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको सहयोगले नै सवारी चालक सकुसल आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छ । अहिले बजारमा उपलब्ध मोटरसाइकलमा ड्रम र डिस्क ब्रेक प्रयोग भएको पाइन्छ । ब्रेकिङ सिस्टमलाई सहयोग पु¥याउन धेरै मोटरसाइकलमा कम्बाइन ब्रेकिङ सिस्टम (सीबीए) र एन्टीलक ब्रेकिङ सिस्टम (एबीएस) जस्ता फिचर पनि आउन थालेका छन् । त्यसैले चालकले आफ्नो मोटरसाइकलको ब्रेकिङ सिस्टमबारे पूर्ण जानकार हुनु आवश्यक हुन्छ । साथै समय समयमा आफैले पनि ब्रेकिङ सिस्टमले काम गरे–नगरेकोबारे परीक्षण गर्ने गर्नु पर्छ ।
कुनै पनि मोटरसाइकल गुड्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका चेनको हुन्छ । दुई वटा स्पोर्केटलाई जोडेर इन्जिनअनुसार पाङ्ग्रा घुमाउन प्रयोग हुने चेन मोटरसाइकलको महत्वपूर्ण पार्टस् हो । यसको प्रयोग बीना मोटरसाइकल चल्न सक्दैन । कहिले काहिँ गुड्दा गुड्दै चेन खस्ने समस्या आएर मोटरसाइकल दु’र्घ’ट’नामा पर्न सक्छ । त्यसैले बेला बेलामा मोटरसाइकलको चेन परिक्षण गर्ने गर्नुपर्छ । साथै आवश्यकताअनुसार चेन स्पोर्केटमा ग्रीस र लुब्रिकेन्टको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलाबेलामा चेनको सफाइ पनि गर्ने गर्नु पर्छ ।
साथै, मोटरसाइकलको मोविलको अवस्था बेलाबखतामा हेर्ने गर्नु पर्छ । यदि मोविल सुकेको वा त्यसमा हुने चिल्लो पदार्थ हराएको अवस्थामा इन्जिन नै सिज हुन सक्ने ख’त’रा रहन्छ । त्यसैले मोविलको परिक्षण निकै आवश्यक हुन्छ ।
‘नेपाल घुम्नै नहुने ७ कारण’ भन्दै भारतीय युवतीले नेपालबारे यसरी गरिन् प्रचार (भिडियो हेर्नुहोस)
सुनको मूल्य पुरानो मूल्य तिर ओरालो लाग्दै आज विहिबार एकै दिन सोच्नै नसकिने गरि घट्यो !
उपचारका लागि नेपालगन्ज जाँदा एमाले नेताले जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री निवास पुर्‍याए : प्रदेश सांसद वली !!